Qodobadii ay ku heshiiyeen Farmaajo iyo madaxweynayaashii hore waxaa kamid ah in Doorashada xiligeeda ay ku dhacdo – Kalfadhi
Qodobadii ay ku heshiiyeen Farmaajo iyo madaxweynayaashii hore waxaa kamid ah in Doorashada xiligeeda ay ku dhacdo
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajo, ayaa shalay kulan casuumaad ah u sameeyay mas’uuliyiin ka socota madasha xisbiyada Qaran, oo ay hoggaaminayeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh.
Kulanka ayaa yimid kaddib markii madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ay dowladda madaxweyne Farmaajo ay ku edeeyeen in ay ku xadgudbeyso Dastuurka dalka Soomaaliya.
Qodobada muhiimka ah ee shirka ay uga hadleen Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ayaa waxaa ka mid ah arrinta doorashooyinka 2020 iyo arrimaha maamul-gobolleedyada dalka.
Qodobada Madaxweyneyaashu ka wada haldeen, isla markaana la isku afgartay, waxaa kamid ah:-
Farmaajo wuxuu ka garaabay kana soo hoyday ficiladii foosha xumaa ee ay kula dhaqmeen Madaxweyneyaashii hore.
Waxaa la isla gartay doorashada hay’adaha dastuuriga ah oo dhan in ay xiligeedii ku dhacdo. Dhamaan dowlada federaalka, dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadeedna ka heshiiyaan modelka doorashada 2020 – 2021
Inla dhowro dastuurka, xuquuqda iyo xorriyaadka muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Ciidamada siyaasada in laga dhex saaro. Siyaasiintuna aysan amniga siyaasadeyn.
La dagaalanka Alshabaab in meel looga soo wada jeesto.
Qodobo kale oo laga wada hadlay lkn lagu balamay in marka la iskaga yimaado oo laga wada hadlo ayaa jira.
Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare ee BF oo booqasho ku tagay xarunta ay ku shaqayso Wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed